कुखुराको मासु खादैहुनुहुन्छ ? सावधान मरेका कुखुराको मासु पर्ला नी ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
कुखुराको मासु खादैहुनुहुन्छ ? सावधान मरेका कुखुराको मासु पर्ला नी !
काठमाडौं १५ साउन । उपत्यकाबासीले बढी रकम अखर्च गरेर पनि गुणस्तरहीन मासु उपभोग गरेर जोखिम मोल्दै आएका छन् । व्यवसायी र मासु पसल सञ्चालकले मरेका कुखुराको मासु उपभोक्तलाई बिक्री गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
त्यसैले उपभोक्तले कुखुराको मासु उपभोग गर्नुअघि एकपटक सोच्नैपर्ने बेला आएको आजको अन्नपूर्णले जनाएको छ । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाडौंले राजधानी भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा झन्डै एक मेटि्रक टन मरेको कुखुरा नियन्त्रणमा लिएको छ ।
क्वारेन्टाइन कार्यालयले नियन्त्रणमा नलिएको भए मरेका ती कुखुराको मासु पनि उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने थियो । व्यवसायीले मरेका कुखुरा अवैध रुपमा राजधानीको सामाखुसी पठाउन लाग्दा क्वारेन्टाइन कार्यालयले शुक्रबार बिहान नागढुंगा नाकाबाट नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको हो ।